January 13, 2020 - khitalinmedia
အသားမဲတယျ ပွောလို့ ဟငျးခကျြကြှေးပွီး အဆိပျခတျသတျပဈ လိုကျတဲ့ အမြိုးသမီး
January 13, 2020 Khitalin Media 0
လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖေးမရမည့်အစား အမြဲတမ်းဝေဖန်တိုက်ခိုက်တတ်သူတြွေဖစ်တယ်လို့ ပညာရှင်အချို့ကဆိုပါတယ်။ ကိုယ်အသားဖြူရင် အသားမဲသူကိုလှောင်တယ် ၊ ကိုယ်က အရပ်ရှည်ရင် အရပ်ပုသူကိုလှောင်တယ် ၊ ကိုယ်ကချမ်းသာရင် ဆင်းရဲသူကိုလှောင်တယ်။ တစ်ပါးသူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ဖေးမရမည့်အစား ဖယ်ကျဉ်သွားအောင် တိုက်ခိုက်လေ့ရှိကြပါတယ်။အားနည်းသူကိုတွေ့ရင် စရမည့်သတ္တဝါကိုတွေ့သလို စနောက်တတ်ကြတာတွေဟာလည်းလူတွေပါပဲ။ အခုလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် […]
ခဈြသူတှကွေားမှာ ဒီအိပျမကျတှေ မကျရငျတော့ သတိထားတော့…
ချစ်သူတွေကြားမှာ စိတ်ထဲမှာ မသိစိတ်ကနေ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဖြစ်နေသောပြသာနာတွေက အိပ်မက်မှာ ပေါ်လာလိမ့်ပါမယ်။ဘယ်လို အိပ်မက်တွေဖြစ်မှာလဲ။ အိပ်မက်တွေကို သတိထားကြည့်လိုက်ပါနော်။ ၁. ချစ်သူနဲ့ပျော်ရွှင်သာယာနေသော အိပ်မက် ချစ်သူနဲ့ကွဲရန် နီးစပ်နေလို့မြင်ရသော အိပ်မက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အိပ်မက်ဆိုတာ ပြောင်းပြန် စဉ်းစားကြည့်ရပါတယ်။ ကိုယ်က ချစ်သူအပေါ်မှာ တကိုယ်ကောင်းဆန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမြဲတမ်း အနိုင်ယူနေတာတွေက ပြသာနာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ […]
ငှအေငျအားမရှိ၍ အဆငျမပွကွေသော ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြား အောငျမွငျသောစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျဖွဈလိုသူမြားဖွဈလိုလငျြ ဒီလိုလုပျပေးပါ…
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများလုပ်ငန်းတိုးချဲ့လိုလျှင် မိမိလုပ်ငန်းအဆင်ပြေ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ချင်ပါသော်လည်း လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုပါ ထိခိုက်လာမည်ဆို၍ ပူပင်နေရသူများ လုံလောက်သော ငွေအင်အားမရှိ၍ အဆင်မပြေကြသူများ အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လိုသူများ——- မိမိလုပ်ငန်းအတွင်းအမြဲတစေ စံပယ်ပန်းကုံးများ ဘုရားကပ်လှူပူဇော်၍ မိမိလိုရာဆုတောင်းရမည်။ ဤအစီအရင်သည် အလွန်အစွမ်းထက်ထိရောက်သောကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်မည်ဆိုပါက …. ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများချမ်းသာ သုခခြင်းပြည့်ဝ၍ မိမိအိပ်မက် အကောင်အထည်ဖော်လာ၍ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းများ အလွယ်တကူ အဆင်ပြေမှုများ […]
အင်ျဂါသားသမီးမြားအောငျမွငျသောဘဝကို ပိုငျဆိုငျလိုလငျြ ဒီလိုလုပျပေးပါ…
အင်္ဂါသားသမီးများအောင်မြင်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ မိမိအိပ်မက်များအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သူများ။မည်သည့်အလုပ်မှ အဆင်မပြေစိတ်ညစ်နေရသူများ။တက်ကြွဖျတ်လတ်မှုမရှိပဲပျင်းရိစွာနေထိုင်နေရသူများ။ ဆန္ဒနှင့်ဘဝတထပ်တည်းမကျပဲ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆီသို့ အလှမ်းဝေးနေ၍ နောက်ကျကျန်နေရသူများ။ အမြဲတစေ ဘုရားစင်တွင် နှင်းဆီပန်း(၇)ပွင့် ကပ်လှူပူဇော်ခြင်းဖြင့် မိမိ ဖြစ်ချင်သောဆန္ဒပြည့်ဝစေရန် ဆုတောင်းပါ။ “အမြဲထာဝရကိုယ်ရောကျမ်းမာစိတ်ရောချမ်းသာစွာဖြင့် စီးပွားလာဘ်လာဘ တိုးတက်ရပါစေလို၏”ဟုဆုတောင်းပါ။ ဤအစီအရင်သည် အလွန်အစွမ်းထက်ထိရောက်သောကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်မည်ဆိုပါက အင်္ဂါသားသမီးများချမ်းသာ သုခ ခြင်းကိုအပြည့်အဝ ခံစားရပြီး အောင်မြင်သော […]
အမွေပြတ်စွန့်လွှတ်မယ်ဆိုပီး ကြေညာလိုက်ရတဲ့ မင်းသားနေမျိုးအောင်ရဲ့သားနဲ့ ဆက်စီမော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင်တို့ဇာတ်လမ်း
မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ဟာ အပစ်အခတ်အကြမ်းအရမ်း၊ အနုအရွ သဘာဝ စွယ်စုံရတဲ့ မင်းသားကြီးပဲ တစ်လက်ပါပဲ။ ဗီဒီယိုခေတ်မှာဆိုရင် အရမ်းကို အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်တွေလည်း ရိုက်ကူးနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ မင်းသားကြီးမှာတော့ မင်းထိုက်ဆိုတဲ့ သားတစ်ဦး ရှိပါတယ်။ မင်းထိုက်ဟာ ပရိတ်သတ်တွေ လက်ခံထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းထိုက်ကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ […]
မိန်းကလေးတိုင်း အချစ်ခံချင်ကြတဲ့ (တဏှာမပါသော) “အချစ်”
တဏှာလား..အချစ်လား.. သူငါ့ကို ဘာလို့ချစ်တာလဲလို့ တစ်ခါတစ်လေမှာ စဉ်းစားဖူးပါလိမ့်မယ် ။ ဘာကြောင့်ချစ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ကိုယ့်ချစ်သူကိုလည်း မကြာခဏ မေးလေ့ရှိကြပါလိမ့်မယ် ။ ရုပ်ချောလို့ ချစ်တာလား ၊ ချစ်စရာကောင်းလို့ ချစ်တာလား ၊ ပိုက်ဆံရှိလို့ ချစ်တာလား ၊ ဂုဏ်ရှိလို့ ချစ်တာလား ၊ ကိုယ်လုံးလှလို့ […]
နံနက်(၇)နာရီအချိန် အာရှလမ်းမကြီးအလယ်မှ လူတစ်ယောက် ခေါင်းငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက်နဲ့ လမ်းလျှောက်လာလို့ ထိုလူအားမေး ကြည့်သောအခါ
ဒါမှမြန်မာစိတ်ဓာတ်ကွ ယနေ့ ၁၁.၁.၂၀၂၀ နံနက်(၇)နာရီအချိန် ကျွန်တော်ကောကရိတ်ဘက်က ကားမှောက်မှုသတင်း ယူပြီးအပြန်မှာ….. အာရှလမ်းမကြီးအလယ်မှ လူတစ်ယောက် ခေါင်းငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက်နဲ့ လမ်းလျှောက်လာလို့…… ကျွန်တော် ဆိုင်ကယ်အား ပြန်ကွေ့ပြီး ထိုလူအားမေး ကြည့်သောအခါ….. ဘန်ကောက်က ပလိပ်မြဝတီမှာ လာတွန်သွားပြီး၊မြဝတီမှ ဘားအံသို့ လမ်းလျှောက်ပြန်နေကြောင်း…. ဘားအံရောက်ရန်အဝေကြီး လိုသေးလာလို့ […]
အားပေးကြမ်းလို့ နောက်တစ်ပုဒ်လာပါပြီ အသံကတော့ ရှယ်ပဲ….
အားပေးကြမ်းလို့ နောက်တစ်ပုဒ်လာပါပြီ အသံကတော့ ရှယ်ပဲ…. ဒီဗွီယိုဖိုင်လေးကလည်း အွန်လိုင်းမှာ လူကြည့်များတဲ့ဗွီယိုဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သနားစရာကောင်းပါတယ် မျက်မမြင်ပါတဲ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဘ၀မှာ စိတ်ဓာတ်မကျပဲ ကိုယ်တတ်စွမ်းတဲ့ ဂီတလေးနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ဖျော်ဖြေပီး ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင် စားသောက်နေတာပါ။ ဂုဏ်ယူစရာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေမှာ ဘယ်သောအခါမှ ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ […]
အကတိုကျပွနျလာရာ လမျးကွုံလိုကျရာမှ စတုတ်ထတနျးကြောငျးသူလေးရဲ့အဖွဈ…
စတုတ္ထတန်းကျောင်းသူကို အဓမ္မပြုကျင့်ကာ လျှာကိုက်ဖြတ် ဒါးဇ(အကုန်သိသတင်းဌာန) အကတိုက်နေသည့် စတုတ္ထတန်းကျောင်းသူကို အဓမ္မပြုကျင့်၍လျှာကိုက်ဖြတ်သည့် ၁၉ နှစ်အရွယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို တရားစွဲတင်ရန်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဘုရားကြီးနယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ဝမ်းဘဲအင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံမြင့်ကျေးရွာ၌နေထိုင်သူ တင်ထွန်းအောင်(ခ)ခေါ်တော ၁၉ နှစ်ဆိုသူသည် ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ ည ၁၀ နာရီတွင်ကျောင်း၌အကတိုက်နေသည့် ၎င်း၏စတုတ္ထတန်းကျောင်းသူညီမကိုဆိုင်ကယ်ဖြင့် […]
အတိတ်မေ့ပြီး အားလုံးကို နေတိုး လို့ပဲ ခေါ်နေတဲ့ ဗေလုဝ ရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ
၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲကာလမှာ လူထုကိုစညျးရုံးနိုငျတဲ့အတှကျ စဈသူကွီးတဈဦးလိုတျောတယျလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ကိုယျတိုငျခြီးမှမျးခဲ့ရတဲ့ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ ဗလေုဝ တဈယောကျဟာ ကနျြးမာရေး မကောငျးတာကွောငျ့ ပငျလုံဆေးရုံမှာ တကျရောကျကုသနရေတယျဆိုတာ အားလုံး သိပွီးဖွဈမှာပါနျော။ အခုအခြိနျမှာတော့ ဦးဗေ တဈယောကျ ပွနျလညျသတိရလာပွီးတော့ စကားမပွောနိုငျသေးဘူးလို့ သိရပါတယျ။ ခွတှေေ လကျတှတေော့ လှုပျရှားနိုငျပွီးတော့ မှတျဉာဏျကသိပျအလုပျမလုပျသေးတဲ့သဘောကိုလညျးတှရေ့တယျလို့ဆိုပါတယျ။ […]